China simbi yakasimba sandbag fekitori nevatengesi | Feiqing
Yakabhururuka strongman sandbag
Yedu yakasungwa strongman sandbag inovandudzwa pahwaro hweStrongman sandbags edu. Zvinogona kuve nani kudzivirira iyo yakasimba murume sandbag kuvhura zipi kuputika. Yakanyanya kusimba! Basa rayo rakafanana neStrongman sandbag. Unogona kumbundira, kudonha, kufamba ... kudzidziswa nezvirema zvinorema.Inogona kutsiva mabhora akakura nematombo, uye inogona kutakurika zvakapoteredzwa.
Strongman Sandbags inogona kudururwa yobva yazadzwa zvakare pane imwe nzvimbo yekurovedza muviri, munda, paki, nezvimwewo, zvinoshanda seyakatakurika inotakurika Strongman maturusi ekudzidzisa evamhanyi vechero ruzivo ruzivo. Iko hakuna kurambidzwa kunzvimbo dzekurovedza muviri. Inogona kuzadzwa nezvinhu zvakasiyana-siyana kugadzirisa zvisikwa, sejecha, mavhu, chikafu ......
Yakasungwa yakasimba sandi bhegi rakagadzirwa ne1050D Cordura, 100% nylon, YKK zipi, yakapetwa kaviri, tambo yakasimba ine tambo 3. Yese Sandbag ine yakavakirwa-mukati yekuzadza bhegi ine yekuwedzera zipi uye yekuvhara-uye-chiuno kuvhara-kuverengera yekuzadza zvinhu inogara izere yakazara sezvaunoshanda kuburikidza nehurongwa hwako. Pane 2pcs mubato mudiki pane yekuvhura fanera, iwe unogona kuvhura kuti uzadze zvinhu nyore.
Kurema kunorema kweStrongman Bag kunoenderana nehukuru uye saizi yenhau iri kushandiswa. Dzimwe nhepfenyuro dzinogona kukonzeresa huremu hwese hwehombodo kuti huve hukuru kana kuti pasi pehurema hwehurema hunofungidzirwa Nekuda kwehunhu hwejira uye kushandiswa kwakatungamirwa, mabhegi eStrongman anogona kuwedzera nekufamba kwenguva nekushandisa. Pamusoro pezvo, aya mabhegi haana kufemerwa.
5. Yakavakwa-Mune Yekuzadza Bhegi
Pashure: Fudza Sack
Zvadaro: Bumper ndiro yekurovedza muviri
Nhema nhema murume sandbag
murume akasimba achikanda bhegi
Kukwira Tambo Yekusimba uye Simba Kudzidziswa.